Makeasplash with these -themed skins! | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire Makeasplash...
Makeasplash with these -themed skins!
Wild Rift တို့ Mobile Legends တို့ PUBG တို့ Free Fire တို့ အားလုံးမှာ ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Theme တွေက အရမ်းကို လူကြိုက်များတဲ့ Theme တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
April လ မှာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအတွက် နှစ်သစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးဆုံးပွဲတော်ကြီးကတော့ ထိုင်းမှာဆို Songkran နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက် ကတော့ သင်္ကြန်ပွဲတော် ကြီးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်တွေက နှစ်ဟောင်းက မကောင်းတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးပြီး နှစ်သစ်မှာ ကံကောင်းပြီး သန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ပါဘဲ။
ကဲဒါတွေကတော့ သင့်ရန်သူတွေကို ရှင်းလင်းဖို့ ကျွန်တော်တို့ အကြိုက်ဆုံး ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Skins တွေ ၀တ်စုံတွေပါဘဲ။
League of Legends : Wild Rift က Battle မှာ လှိုင်းတွေနဲ့ ရိုက်ခတ်ဖို့ တစ်ချို့ Champions တွေက ရေ Theme နဲ့ ပုံစံတွေ Skin တွေကို ထုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Support/Mage ဖြစ်တဲ့ Nami (The Tidecaller) ကတော့ အလွန်မိုက်တဲ့ ရေ Character ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုအနိုင်ရရှိဖို့ကို တာဆီးတဲ့ ရန်သူတွေ ရေနဲ့ နှစ်သတ်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။
Image Credit: Riot Games / Wild Rift
Singed လဲရှိပါသေးတယ်။ သူကတော့ Tank/Mage ချန်ပီယံ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ Surfer Singed Skin နဲ့ Surf နေသလိုပုံနဲ့ မိုက်နေပါတယ်။ Golden Lock နဲ့ Sunscreen လေးတွေသုံးပြီး Surf လုပ်လိုက်ပါအုန်းနော်။
နေလုံးကြီးနဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို သတိရဖို့ Mobile Legends ကလဲ ရေတွေစင်နေသလို ကစားနိုင်တဲ့ Heros တွေအများကြီး ထုတ်ထားပါတယ်။
Masksman Claude ကတော့ ရှေ့ဆုံးကနေ​​ ဦးဆောင်ပြီး ထွက်ရှိလာပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ Lifeguard Skin က ရေပြွတ်သေနတ်နဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းအောင် ရေကစားနိုင်ပါတယ်။
Mermaid Princess လို့ ခေါ်တဲ့ Oldette ရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Skin ကတော့ တင့်တယ်ပြီး Magic တွေနဲ့ ပြည့်၀နေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ Aqueous Skill Effects တွေကို ဖော်ပြထားပြီး ‘Under the Sea’ ဆိုတာနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
သင်က ရန်သူတွေကို ရေအောက်မှာ တိုက်ခိုက်ရတာကြိုက်တဲ့ Marksman လိုပုံစံဆိုရင်တော့ Karrie’s Gill Girl က သင့်ရန်သူတွေကို ရေနှစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး Battle Royal Shooter​​ ဂိမ်းကတော့ ရေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့​ ဂိမ်းထဲက အပြင်အဆင်တွေကိုရရှိမှာပါ။ အရင်က PUBG Mobile Season 8 အတွက် Royale Pass ကတော့ ပျော်စရာကောင်းပြီး Aqua-Inspired ၀တ်စုံတွေနဲ့ Item တွေရခဲ့ပါတယ်။ Shore Set ထဲက Shell တွေ ၊ Clownfish ၀တ်စုံတွေ နဲ့ Squid Squad လွယ်အိတ်တွေပါ။ အဲ့ ပစ္စည်းတွေ သင်ရရှိခဲ့လား?
စိတ်မပူပါနဲ့။ ရေကူး၀တ်စုံလေး၀တ်ချင်သေးရင်တော့ ဒီ ၀တ်စုံတွေကို Shop မှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Lifeguard Set (လိမ္မော်ရောင်)
Dive Into the Blue Set (Limited-Time)
Free Fire ကလဲ သူတို့ Characer တွေ အတွက် အရမ်းမိုက်တဲ့ ကမ်းခြေမှာ ၀တ်လို့ရတဲ့ ၀တ်စုံ Bundles တွေ ထုတ်ထားပါတယ်။ Beach Lover Bundle ဆိုပြီး Diamond ၆၉၉ နဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ရောင်စုံ Suits တွေကိုလဲ​ ရနိုင်ပါတယ်။
Swimming Bundle Suit
Captain Bubbles Bundle Suit
Previous articleFree Fire Skyler: ဘာလို့ သင့်အသင်းမှာ ဒီ Superstar ကို လိုအပ်တာလဲ?
Next articleသင်မသိသေးတဲ့ Free Fire Easter Eggs အကြောင်းများ အတွက် Booyah လို့ အောင်လိုက်ပါ!